” ဘုန်းမင်းနေလရဲ့ မွေးနေ့အတွက်We Love phonemin fan များမှ ခိုင်နှင်းဝေ ရင်ခွင်ရိပ်မြုံ ဂေဟာသို့ အလှုငွေ(40,000 Kyat)လေးသောင်းကျပ်လှူဒါန်းမှု” – myannewsmedia.com
” ဘုန်းမင်းနေလရဲ့ မွေးနေ့အတွက်We Love phonemin fan များမှ ခိုင်နှင်းဝေ ရင်ခွင်ရိပ်မြုံ ဂေဟာသို့ အလှုငွေ(40,000 Kyat)လေးသောင်းကျပ်လှူဒါန်းမှု”
CeleChitThu ပရိသတ်ကြီးရေ ဘုန်းမင်းနေလကတော့ ပရိသတ်တွေသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးကြီး ခင်ဇာခြည်ကျော်ရဲ့ အနုပညာမျိုးဆက်သစ်လေးပါ။(၂၀၁၈) အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲရဲ့ ရွှေကြိုတစ်ယောက်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေရသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အမြဲသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်နေတတ်သူနှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအသည်းကျော် ဘုန်းမင်းနေလကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေအပြင် ပညာရေးဘက်မှာလည်း ထူးချွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ သူ့ကိုချစ်တဲ့ we loveတွေက”ခိုင်နှင်းဝေ ရင်ခွင်ရိပ်မြုံ ဂေဟာသို့ဘုန်းမင်းနေလ (မွေးနေ့အတွက်) We Love phonemin fan များမှ ကလေးများ အတွက် အလှုငွေ(40,000 Kyat)လေးသောင်းကျပ် လှုဒါန်း၍ လက်ခံရရှိပါတယ်ရှင်🙏အလှူရှင် တယောက်စီတိုင်း ကို မခိုင်နှင်းဝေနှင့် အသင်းသူ/ သား များ မှ အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်!(၇)ရက်သားသမီးများ အားလုံး စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်း နဲ့ ပြည်စုံကြပါစေ…ကပ်ရောဂါ အပေါင်းမှလဲ ကင်းဝေနိုင်ကြပါစေရှင့်🙏” ဆိုကာ ခိုင်းနှင်းဝေဂေဟာမှာသွားရောက်လှူဒါန်းပေးခဲ့ကြတာပါ။
အနုပညာအလုပ်တွေရပ်နားထားပေမယ့်လည်း ပရိသတ်အချစ်တွေကို ပိုပိုတိုးပြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဘုန်းမင်းနေလအတွက်ကတော့ တကယ်ကို စိတ်ချမ်းသာစရာပါပဲနော်။ ဘုန်းမင်းနေလရဲ့ we loveတွေရဲ့ ကုသိုလ်ကို သာဓုခေါ်ခဲ့ကြပါဦးနော်။
” ဘုန္းမင္းေနလရဲ႕ ေမြးေန႔အတြက္We Love phonemin fan မ်ားမွ ခိုင္ႏွင္းေဝ ရင္ခြင္ရိပ္ၿမဳံ ေဂဟာသို႔ အလႈေငြ(40,000 Kyat)ေလးေသာင္းက်ပ္လႉဒါန္းမႈ”
CeleChitThu ပရိသတ္ႀကီးေရ ဘုန္းမင္းေနလကေတာ့ ပရိသတ္ေတြသိၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေက်ာ္မင္းသမီးႀကီး ခင္ဇာျခည္ေက်ာ္ရဲ႕ အႏုပညာမ်ိဳးဆက္သစ္ေလးပါ။(၂၀၁၈) အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲရဲ႕ ေ႐ႊႀကိဳတစ္ေယာက္အျဖစ္ပါဝင္ခဲ့ၿပီး အခုခ်ိန္မွာေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုဆက္တိုက္လုပ္ကိုင္ေနရသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏႈတ္ခမ္းနီမေလးေတြအသည္းေက်ာ္ ဘုန္းမင္းေနလကေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြအျပင္ ပညာေရးဘက္မွာလည္း ထူးခြၽန္တဲ့သူတစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေန႔မွာေတာ့ သူ႔ကိုခ်စ္တဲ့ we loveေတြက”ခိုင္ႏွင္းေဝ ရင္ခြင္ရိပ္ၿမဳံ ေဂဟာသို႔ဘုန္းမင္းေနလ (ေမြးေန႔အတြက္) We Love phonemin fan မ်ားမွ ကေလးမ်ား အတြက္ အလႈေငြ(40,000 Kyat)ေလးေသာင္းက်ပ္ လႈဒါန္း၍ လက္ခံရရွိပါတယ္ရွင္🙏အလႉရွင္ တေယာက္စီတိုင္း ကို မခိုင္ႏွင္းေဝႏွင့္ အသင္းသူ/ သား မ်ား မွ အထူး ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ရွင္!(၇)ရက္သားသမီးမ်ား အားလုံး စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း၊ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း နဲ႔ ျပည္စုံၾကပါေစ…ကပ္ေရာဂါ အေပါင္းမွလဲ ကင္းေဝႏိုင္ၾကပါေစရွင့္🙏” ဆိုကာ ခိုင္းႏွင္းေဝေဂဟာမွာသြားေရာက္လႉဒါန္းေပးခဲ့ၾကတာပါ။
အႏုပညာအလုပ္ေတြရပ္နားထားေပမယ့္လည္း ပရိသတ္အခ်စ္ေတြကို ပိုပိုတိုးၿပီးပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ဘုန္းမင္းေနလအတြက္ကေတာ့ တကယ္ကို စိတ္ခ်မ္းသာစရာပါပဲေနာ္။ ဘုန္းမင္းေနလရဲ႕ we loveေတြရဲ႕ ကုသိုလ္ကို သာဓုေခၚခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
← ” ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်သပိတ်စစ်ကြောင်း ဖြိုခွဲခံရမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့အောက်တန်းကျမှုဟာ လူမဆန်တဲ့အပြင် အာဏာရူးမှုတွေ ပိုပိုပြင်းထန်လာပြီလို့ သုံးသပ်လိုက်တဲ့ဒေါင်း”
” ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်သပိတ်စစ်ကြောင်း မှာကျရှုံးခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့ရဲဘော်ကြယ်ပွင့်တေ​ွအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာ စျေးရောင်းတာတွေရပ်နားခဲ့တဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်” →